Iimfihlakalo eziLusizi zeRosari Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Xa ifayile ye- iimfihlakalo zerosari KubuhlunguInqanaba elichazwe eBhayibhileni lokubandezeleka kweNkosi yethu uYesu Kristu lithathelwa ingqalelo. Kule mxholo siza kukuxelela ukuba zeziphi ezo zinto ziyenzayo.
1 Iimfihlakalo ezibuhlungu zeRosari kuwe
3 Zithini iimfihlakalo ezibuhlungu?
3.1 Umthandazo egadini
3.3 Isithsaba ngameva
3.4 UYesu ethwele umnqamlezo eKalvari
3.5 Ukubethelelwa emnqamlezweni
Iimfihlakalo ezibuhlungu zeRosari kuwe
Lo mxholo ubandakanyiwe ngaphakathi irosari engcwele Imiba enxulumene nothando nokufa kukaYesu iyaqwalaselwa. Bacacisiwe kwiindidi ezahlukeneyo zebhayibhile kwaye bayancedisana nokwenziwa kwerosari; Ngendlela efanayo, isetyenziswa kwezinye iindawo zokuzinikela ukubonisa intlungu eyayiviwa yiNkosi yethu uYesu Kristu ngaphambi kokufa kwayo.
Ukusukela ukubhengezwa kwefayile ye- Iimfihlakalo ezikhanyayo Ngo-2002 ngu-Saint John Paul II wayegcinelwe uLwesibini nangooLwezihlanu, nangona kunjalo, ayasetyenziswa nakwezinye iintsuku zonqulo, kodwa ezi ntsuku zimbini zezona zibalulekileyo.
Ukwazi imvelaphi yeemfihlakalo eziSizi kuyimfuneko ukuba uqale wazi ukuba iirosari engcwele ivela phi. Ukudalwa kwayo kuthobela u-Santo Domingo de Guzmán ovumayo; xa ngokokwakhe wayenombono apho iNtombikazi enguMariya yamcebisa ukuba athandaze irosari ukuba iyakusebenza njengesixhobo sokuguqula isiya kwiiAlbigenses.
Olu gqatso aluzange lunikezwe ukuba lwamkele uqeqesho lwamaKatolika. Ukusukela ngoko, i-Dominican Order yayiphethe ekusasazeni iRosari engcwele kuwo onke amazwe obuKristu, ukuvela kwayo kuye kwaba ngolu hlobo lulandelayo:
Ngo-Okthobha 7, 1572, umnyhadala wakhe wamiselwa njengo "Nenekazi Lethu Loyiso" ngu-Pope Pius V.
Kunyaka olandelayo u-1573, uGregory XII walitshintsha igama laba ngu "Mongameli wethu weRosari." Ukutshintsha umhla weCawa yokuqala ngo-Okthobha.
Ngo-1888 umhla waphinda watshintshelwa ku-Okthobha 7.
Kwinkulungwane ye-XNUMX, u-Blessed Alano de la Roca wayephethe ukuyivusa, kwaye iimfihlakalo, isivumo sokholo, uBawo Wethu kunye no-Hail Mary, kuthandazwa imithandazo esibhozo.
U-2002, uqhubeka notshintsho nohlaziyo nguPopu John Paul II owongeza imfihlakalo eyongezelelweyo ebizwa, ekhanyayo etshintsha iintsuku zokufezekiswa kwe iimfihlakalo zerosari.
Zithini iimfihlakalo ezibuhlungu?
Iimfihlakalo eziLusizi ziyinxalenye ye-trilogy eyakha iRosari eNgcwele kude kube ngo-2002, xa kongezwa imfihlakalo ekhanyayo, emva kwalo msitho, iimfihlakalo eziLusizi yayinguye kuphela kwabathathu abangakhange benze lutshintsho ngeentsuku zokuzinikela. okanye ukuqonda.
Zonke ezinye iimfihlakalo zatshintshiwe ngomhla wokufakwa kwazo, umzekelo iimfihlakalo zovuyo kuye kwafuneka ukuba zenziwe ngoMvulo nangoLwesine, emva kohlengahlengiso olwenziwe ngeMivulo nangoMgqibelo. Ngokubhekisele kwezizukileyo, zazibanjwa ngeeCawa, ngooLwezithathu nangoMgqibelo, emva kohlaziyo kuphela ngeeCawa nangooLwezithathu.
Ukuzinikela okubuhlungu kuyahluka ngokusekwe kwizinto ezikhathalelwe kubomi beNkosi yethu uYesu Krestu kwaye ujonge koku kulandelayo:
Ikwabandakanya usizi lukaYesu eGetsemane, zifumaneka kwibhayibhile kufundo lukaLuka, ijongene nexesha apho uYesu ahlangana khona nabafundi bakhe egadini yaseGetsemane wabaxelela:
«Hlala apha ngelixesha ndiza kuthandaza »(…)« Umphefumlo wam ulusizi kude kuse ekufeni; hlalani apha nibukele nam. Uhambele phambili kancinci, wawa ngobuso emhlabeni, wacenga ngoluhlobo: "Bawo, ukuba kunokwenzeka, mayidlule kum le ndebe; 26).
Apho uYesu ebotshelelwe khona kwikholam kwaye efumana esinye sezona zohlwayo zikhohlakeleyo kwezakha zaziwa, kuYohane 19,1, kuMarko, kuMateyu nakwezinye iivesi kukho inkcazo encinci yale nyaniso, masibone:
«UPilato wamthabatha uYesu, wamtyakatya. Amajoni aluka isithsaba ngameva, amthi jize ngaso entloko, amthi wambu ngengubo ebomvu, besondela kuye, bathi kuye, "Uxolo, Kumkani wamaYuda." Kwaye bamqhwaba ngempama ”(Jn 19,1: 3-XNUMX).
Ibizwa ngesiLatin "ICoronary Spines", ivela kumzuzu ekubekwe kuwo isithsaba sameva kuYesu, lo mzuzu unokufundwa kuMateyu 27 27'21 masibone:
“Emva koko amajoni erhuluneli amthabatha uYesu amsa endlwini yerhuluneli, awuhlanganisela kuye umkhosi uphela. Amhluba, aphosa ingubo emfusa, aluka isithsaba ngameva, amthi jize ngaso entloko; esandleni sakhe sokunene, yanengcongolo; ayeguqa ngamadolo phambi kwakhe, ahlekisa ngaye esithi, Aa! , Kumkani wamaYuda ".
UYesu ethwele umnqamlezo eKalvari
Esinye isiqendu sokubandezeleka okukhulu kutitshala esibizwa ngokuba "yiNdlela yoMnqamlezo", iyimfihlakalo yamanqam kwirosari kwaye imele ukubandezeleka okukhulu. Amakholwa kufuneka acamngce ngalo mzuzu: KuMarko 15, 21-22, oku kulandelayo kuyahambelana:
«Kwaye banyanzela umntu owayedlula, uSimon de Carene, owayebuya endle, utata ka-Alexander noRufus, ukuba athwale umnqamlezo wakhe. Bamsa endaweni yeGolgotha, ethetha "Ukhakhayi" (Mk 15: 21-22).
Lelinye lawona maxesha alusizi ebantwini, ukubethelelwa emnqamlezweni nokufa kukaYesu. Le mfihlakalo ithetha umzuzu omkhulu wokucinga kunye nokucamngca; imele lonke usizi lwamaKatolika kodwa nethemba lokuba azi ukuba umesiya uza kubuya eze kulungisa ubukumkani bakhe, Makhe sibone ukuba uLucas uyijonga njani:
“Bakufika kwindawo ebizwa ngokuba yiKalvari, bambethelela emnqamlezweni kunye nezaphuli mthetho, enye ngasekunene, enye ngasekhohlo. Wathi ke uYesu, Bawo, baxolele, kuba abayazi into abayenzayo. Umkhusane wale ndawo ingcwele wakrazulwa embindini, watsho uYesu ekhwaza kakhulu, wathi: "Bawo, ndiwubekile umoya wakho ezandleni zakho." Akutsho, waphuma umphefumlo ".
Iimfihlakalo ezibuhlungu zicamngca emva kweentsimbi ezinkulu nezincinci ezenziwe emva koBawo Wethu, ii-10 Zibonge uMariya noZuko. Ukuba uwuthandile lo mxholo, siyakumema ukuba wabelane nawo kwiinethiwekhi zakho zentlalo; khumbula ukufunda inqaku elilandelayo Iimfihlakalo ezibuhlungu zicingisisiwe apho uza kufumana ulwazi olongezelelweyo.